Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana fandroana sensor / Sensor Peho rano mafana sy mangatsiaka fotsy
Amin'izao vanim-potoana misy izao ny valanaretina izao, ny fanasan-tànana dia iray amin'ireo fepetra mety sy mahomby indrindra hisorohana ny fisorohana. Raha tsy voasasa tsara amin'ny tanana ny tanana dia afaka miditra amin'ny vatana ny pathogens eo amin'ny tànana amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny mucosal. Ny fanasana ny tananao sy ny fitazomana azy ireo hadio dia mety hampihena ny mety hisehoan'ny coronavirus vaovao.
Rehefa avy nanasa ny tananao ianao ary nandro ny rano, ny tànanao madio dia nikasika ny potika feno bakteria, ka nahatonga ny fandotoana faharoa. Ny marika manual dia mora voan'ny aretina! Amin'ity vanim-potoana ity, ny tsirairay dia mila mampiasa fauceta induction
SKU: EVE-0180-Fotsy Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana fandroana sensor Tags: Deck Mounted, Sofotra miorina, Fangaro mifangaro, faucet sensor